Beeralayda Labbada Shabeele Oo Dayactir Ku Samaynaaya Biyo Xidhka Sabuun Ee Wabiga Shabeele (Sawirro)	Saturday, 23 April 2016	Soomaaliya
Guddiga beeralayda Afgoye iyo Balcad ayaa kulan ay yeesheen waxa ay ku go’aansadeen inay dayactir ku sameeyaan biyo xireenka Sabuun iyagoo booqday halka biyo xireenkaas uu wabiga ugaga soo daro biyaha lagu keydiyo ee deegaanka Xawaadley.
Beeralaydan oo soo saarta inta badan khudaarta iyo geed miroodka laga cuno magaalada Muqdisho ayaa waxa saameyn ku yeeshay wax soo saarka beerahooda muddo bil ah oo uu guray wabiga Shabelle.
Xaaji Naasir Cali Axmed oo ka mid ah Ururka ay ku mideysan yihiin Beeraleeyda labada Shabeelle ayaa sheegay in in beeraleeyda labada gobal oo Iskaashanaya ay dib u dayactir ku sameynayaan Biyo-Xireenkii hore ee Keydka Biyaha.
Sidoo kale Guddoomiyaha Ururka Beeraleeyda labada gobal ee Shabeellaha Dhexe iyo Shabeellaha Hoose Xasan Barkhadle Wardheere ayaa ugu baaqay beeraleeyda Soomaaliyeed in ay ay isku tashadaan oo ayna gacmaha hoorsan.
Biyo Xireenka Sabuun oo u ahaa keyd beeralayda gobolada Sh/dhexe iyo Sh/hoose ayaa burbur waxaa ka soo gaaray labaatankii sano ee la soo dhaafay.
« NSS-ta Magaalda Muqdisho Oo Gacanta Ku Dhigay Labbo Gaadhi Oo Mid Laga Buuxiyey Walxaha Qarxa	Jawaari: Raisal Wasaarha Ayaan Ka Sugaynaa Sharciga Ay Xukuumadiisu Ku Fulin Karto Doorashada »